Abazali abaningi isikhathi eside ngaphambi kokuba umntwana ezweni sebeqala cabanga igama layo. Abanye bazi kusengaphambili indlela ushayele ingane. Abanye basuke bengazi noma abakwazi ukuthola isisombululo langempela, futhi ngenxa yalokho sidinge izeluleko. Ngokuvamile imikhaya Livamise igama yokudumisa osanda kuzalwa noma ogogo nomkhulu, obabekazi nomalume, nokunye. Akukhona bulungile kakhulu. Okokuqala, kunenkolelo yokuthi igama ingane ithatha izintambo phetho. Futhi okwesibili, uma abantu ababili elinegama elifanayo emkhayeni, omunye wabo uyoba bangajabuli. Ngakho-ke kungcono ushayele ingane, esekelwe umsindo amagama izici esingokwemvelo. Kulesi sihloko sizoxoxa ngalokho izici endowed Yang: igama ukubaluleka yomsuka nekhwalithi ukuthi unika umuntu.
Yini Yang ngesikhathi eseyingane?
Kwasekusithi kusukela igama lesiHebheru kaJohane, okusho "ngomusa kaNkulunkulu" noma "uNkulunkulu awuniké." I ongumvikeli indoda uJan igama nguJohane uMbhapathizi noJohane Evangelist, kanye iplanethi - Mars, ayikwazanga kodwa kuthinte isimo lwezikhali yayo. Yini ikhula encane Yang? Meaning of igama kubonisa ezifweni yayo ukuthuthukiswa ngokushesha, ngokwengqondo nangokomzimba. Ingane wayekhuthele kakhulu, ukwazi futhi ukubamba kalula ulwazi olusha. Nokho, ngokungafani umzimba nengqondo, Yang ngokomzwelo sikhula kancane kancane, ngakho abazali kudingeka ngonanzelelo imfundo ngokwengqondo ingane. Wakwenza kanjani abe uma ekhula?
NoBuchwepheshe izinga omdala Jana
Cishe, umndeni uyoziqhenya siyoba luhlobo luni lwabantu luyokhula Yan. okusho kwegama umnikeza a ingqondo ebukhali, amakhono ezinhle yenhlangano, ikhono lokucwaninga kanye likhono lekucabanga ngalokuhlelekile. Yang akuvamile uholwe umuzwa nezifiso izinzwa, cishe nesisindo futhi ucabangele wonke, sizobukeza, bese kuphela wenze isinqumo. Lokhu kungenziwa ngokuthi izimfanelo zayo ezinhle. Nokho, ngezinye izikhathi inkani futhi zokungazimiseli ukuthatha iseluleko kothile ukugxambukela uJan umsebenzi ibhizinisi, futhi uyafisa ukwenza yonke into ngokwakho (hhayi ngokuphathisa abanye igunya kwabanye) angase abe nomthelela omubi emsebenzini wakhe. Uma uyokuzwa lokubekwa eqhulwini kodaba lokuvulwa futhi ulawule khona imizwelo yakho, khona-ke ungakwazi ube ngumphathi yimpumelelo.
Yang endleleni esisebenzelana ngayo nabantu
Meaning of igama Ian - "ayelinikwe nguNkulunkulu" - is kahle ebonakaliswa ubuhlobo bakhe nabangani, ikhono lokwenza izivakashi zamukelekile. Akayena engakwenqeni ihlaya, ukuhleka ngokuvamile futhi ungumholi e inkampani, ukuhlangana ngabo kuye iqembu enobungane. Yang engasekela ezikhathini ezinzima, futhi akazange alahlekelwe inhliziyo, ukuba ukuqiniseka zemvelo. Ngokuhlanganyela ukuphikelela lesi sici kuvumela ukufinyelela phezulu, ngisho nalapho kubonakala kunzima futhi unsolvable kuqalile. Uyakwazi ukuthola umhlabathi ophakathi ukuxhumana: ibe mnene, ngenkathi ugcina isabelo okukhulu, kanzima ukuze balinganisele phakathi imizwa yakho kanye nesibopho. Nokho, okuningi kuxhomeke kulokho sikhathi sonyaka Yang wazalwa.
Lisho ukuthini igama elithi i-oyisebenzisayo iyahlukahluka kancane kuye usuku lokuzalwa. Ngakho, ebusika Yang yisijaka nakakhulu futhi ngokomzwelo, kalula "qhumisa" ukuvuleka. Noma ubani wazalwa ekwindla, onomoya omnene futhi kunengqondo, ukuphatha kangcono imizwa yabo. Kodwa Yang, ozalwa ehlobo, ezolile kakhulu futhi ngesikhathi esifanayo sengozini, ebucayi. Lezi zimo zokuma kumele kubhekwe lapho uhlela ikusasa lengane.
izici ezivamile zabantu enegama-Jan
Yini enye ongayisho umuntu egqoke igama? Uma sihlanganise izici eziyisisekelo, the yang - igama, ukubaluleka elinendawo uhlamvu ezimbili. Ngakolunye uhlangothi, lapho enenkani, nemithi, olinganiselayo, futhi nomunye - ngokomzwelo futhi ebucayi. Kubalulekile ukuthi imvelo lapho likhula futhi kanjani sibhekane nokuphila ezimweni. Uma Yang zonke yokufunda ukulawula imizwa yabo, ukunqanda ukukhathazeka, futhi ezindabeni kubuswa yikuphi ukuhlakanipha nolwazi, unikezwa ngezinga elithile izifiso nemizwa (bakhe nabanye), khona-ke uyokwenza umholi omkhulu, umngane weqiniso nomuntu omuhle umndeni.
Vishuddha (Chakra) kufanele aphendule ngalokho, indlela ukuvula kanjani ukuthuthukisa futhi ubuyisele
Yini igama Oksana nalokho isiphetho umnikazi walo
Kungakhathaliseki nokuthi ukufunda telekinesis? Kanjani ukuze balukhulume kahle telekinetically ngokushesha
Lapho ukukhwehlela aholele engqondweni: kwezimbangela eziyinhloko kanye nokwelashwa
Kungenzeka yini ukukhiqiza esangweni kokuzihlanganisa ngezandla zabo?
Imijovo psoriasis iziphi?
Elena Denisova: Biography, empilweni yakho, isithombe, indima abadumile
Kangakanani ithala ehlobo endlini
Okunakekela yomkhiqizo: imithetho kanye nezincomo
Princess Mihrimah Sultan: Biography
Gcina izandla kwi-Health Pulse